Archives momba ny fiarovana ara-panahy - Countdown ho an'ny fanjakana
Category Archives: Fiarovana ara-panahy
Edson - Ny foko, tehina helatra
Tsy ho ela dia ho maratra ny Fiangonana Masina.
Akaiky kokoa an'i Jesosy
Inona no tena ilaina amin'izao ora izao.
Gisella Cardia - Hitondra fiarovana ny rosary
Aoka ho sitrapon'Andriamanitra foana.
Alicja Lenczewska - Manomana Sisa amin'ny Sitrapon'Andriamanitra
Ny finoana toy izany dia hamonjy anao amin'ny andro faharavana sy fanadiovana.
Edson Glauber - Aza matahotra fanenjehana
Andriamanitra dia hanao izay tsy azonao atao.
Luz de Maria - Mitoera soa aman-tsara ato am-poko
Ny mitoetra am-pahatokiana dia tsy midika hoe navotsotra amin'ny ho avy, fa miatrika amim-pilaminana.
Amin'ny maha-mpikamban'ny Church Militant antsika dia manana fitaovam-piadiana tsy mampino isika…